Deg Deg:-Barlamaanka Soomaaliya oo barito ku dhawaaqaya Xiliga Doorashada Madaxweynaha | Kobciye24.com
Deg Deg:-Barlamaanka Soomaaliya oo barito ku dhawaaqaya Xiliga Doorashada Madaxweynaha
Jan 23, 2017 - jawaab
Guddoomiyaha golaha shacabka, mudane Maxamed Sh. Cismaan (Jawaari) ayaa maanta xafiiskiisa magaladda Muqdisho waxaa uu ku qaabiley guddoonka Aqalka sare ee dalka ayagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta labada Aqal isla markaana ay u dhexmari lahayd wad shaqayn ku dhisan horumarinta midnimadda iyo adkaynta qaranimo Soomaaliyeed.
Guddoonka barlamanaka federaalka Soomaaliya oo la isku yiraahdo guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa kulankoodu maanta wax ay isku afgarteen in maalinta beri ah kulanka barlamaanka lagu dhiso guddiga qaban qabada doorashadda madaxweynaha Soomaaliya.
Guddiga ayaa ka shaqeyn doonta doorashadda madaxweynaha hanaanka ay u dhacayso iyo ku dhawaaqida xiliga rasmiga ah ee la qabanadda doorashadda madaxweynaha.
dhanka kale,guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Sh. Cismaan (Jawaari) ayaa xafiiskiisa qaabilay Jabriil Ibraahim Cabdulle oo kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka mdaxweynaha, waxayna ka wada hadleen arimha doorashadda madaxweynaha.
Mudane, Maxamed Sh. Cismaan (Jawaari) ayaa Musharax Jabriil Ibrahim Cabdule gudoonsiiyey buugaaga ay ku qoranyihiin taxanaha doorashadda golayashaaha Sharci dajinta qaranka laga soo bilaabo sanadkii 1959-kii iyo habraaca iyo xeer hoosada u gaarka ah doorashadda madaxweynaha soomaaliya.